I-Knockbodly Heights - I-Airbnb
County Kilkenny, i-Ireland
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-John And Corona
U-John And Corona Ungumbungazi ovelele
Le ndlu yasepulazini esanda kubuyekezwa ivulekile kahle futhi ihlaliswa ngokuhlobisa okukhanyayo nokuthinta okuhle kakhulu kulo lonke. Misa i-1km ukusuka edolobheni elihle laseGraiguenamanagh emagqumeni aseBrandon, egcwele ubumnandi nohambo olufanele nanoma yiliphi iqembu lobudala (ukugibela isikebhe, ukugibela izintaba, izindlela zokuhamba ezinhle, ukugibela ibhayisekili nokunye okuningi). Idolobhana lisingatha iDuiske Abbey enhle neminye imicimbi eminingi nemisebenzi unyaka wonke. Itholakala emfuleni iBarrow futhi isendaweni emaphakathi kakhulu.
Izinja zezinja ezinendawo enkulu yokugijima evikelekile zihlinzekwa. Kuze kube yizimoto ezi-5 ezipakwe egcekeni elinesango elivikelekile. Igumbi elisendaweni lokugcina lokudoba, ukuhamba izintaba, amabhayisikili, nanoma yiziphi ezinye izesekeli ezinikeziwe. Umshini wokuwasha nokomisa kuyatholakala ezivakashini ngenkokhelo eyengeziwe.
I-Idyllic Country setting in a endaweni enokuthula enendawo enhle nezindawo zokuhamba zezwe. Isendaweni eyi-1km nje emgwaqeni wezwe osuka edolobheni laseGraiguenamanagh le ndawo iphakeme futhi inezindawo ezimangalisayo. Iseduze nedolobha laseBorris, Co. Carlow (ukushayela imizuzu eyi-6), futhi ingaphakathi kwedrayivu ekhululekile eya ezindaweni ezinkulu zezitolo zaseKilkenny, eCarlow, eWaterford naseWexford.
Ibungazwe ngu-John And Corona
Ihlala itholakala futhi kungaxhunywana nayo noma nini
UJohn And Corona Ungumbungazi ovelele